UTim Cook uza kuqhubeka nokubheja kuthungelwano ngocingo emva kobhubhane | Ndisuka mac
UTim Cook uza kuqhubeka nokubheja kuthungelwano ngocingo emva kwesifo
UTim Cook, i-CEO yenye yezona nkampani ziphumelele kakhulu kwihlabathi kunye neengeniso ezithandekayo eziqaqambileyo, ubalaselisa ukubaluleka kokusebenza ngomnxeba naxa ubhubhane sele utshatyalalisiwe. Amanani aqinisekisa uTim kunye nenkampani yakhe (kunye nabanye abaninzi) ukuqhubeka nokubhenela emsebenzini oxubeneyo phakathi kobuso nobuso kunye nasekhaya. Imisebenzi emininzi inokuqwalaselwa kwiimayile kude ne-ofisi, nangona umsebenzi wobuso ngobuso uhlala ubalulekile kweminye imisebenzi. I-Apple iya kuqhubeka nokubheja emsebenzini okude.
Ngaphandle kobhubhane otshabalalise izigidi zobomi kunye nemisebenzi kwihlabathi liphela. Ngaphandle kwamashishini aphelileyo kwaye kuye kwafuneka ukuba avale iingcango zawo, iApple iyaqhubeka nokurekhoda impumelelo. Ngokusengqiqweni ayisiyonto yosuku okanye unyaka. Uvuna into ebeyihlwayela amashumi eminyaka. Okwangoku iApple yinkampani yenombolo ye-1 kwicandelo layo malunga izibonelelo ezinomdla kunye neenombolo ezithile zehlazo.
Ekuboniseni iziphumo zekota yesibini, uApple wakhankanya ngenkxaso yamanani akhulayo kwakhona, oko I-telework ikamva Kwaye ifikile embindini wesifo, kodwa ize kuhlala ngaphaya. Nokuba imigaqo iyathanjiswa, amanani osulelo ayehla kwaye ubhubhane uyaphela, ukusebenza ekhaya kubonakalise ukuba luncedo kwaye kuya kuqhubeka kuyinto ebalulekileyo ekufuneka ithathelwe ingqalelo.
Xa lo bhubhane uphela, iinkampani ezininzi ziya kuqhubeka nokusebenza ngaphakathi imo ye-hybrid. Ukusebenza ekhaya kuya kuqhubeka kubaluleke kakhulu.
Njengakuyo yonke into, ukusebenza ekhaya kunayo okuhle nokubi. Okwangoku kubonakala ngathi iinkampani zifumene indawo ekufuneka ziyisebenzisile kwaye zenze kakuhle, kuba into ebonwayo kukuba izibonelelo ziyafana okanye zingcono kunezinye iindlela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UTim Cook uza kuqhubeka nokubheja kuthungelwano ngocingo emva kwesifo
Imidlalo ye-Epic ingqonge iingcali ezaziwayo kwityala layo nxamnye neApple